Kukadzi 17, 2017
A MSF worker takes details from patients at a clinic in southern Zimbabwe
Hupenyu hwevanhu hwave panjodzi huru sezvo vana chiremba vakuru vange vari pamabasa vabatana mukuramwa mabasa nana chiremba vadiki.
Mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctor’s Association, Dr Edgar Munatsi, vati vana chiremba vakuru vanoshandira zvipatara zvehurumende vabatana nana chiremba vadiki avo vakaramwa mabasa kubva musi we Chitatu sezvo vawandirwa nebasa.
VaMunatsi vatiwo kunyange hazvo vari kusiririswa nekutambudzika kuri kuita varwere, vati vaneta nekunyeperwa nehurumende nekudaro havagoni kudzokera kumabasa zvinyunyuto zvavo zvese zvisati zvagadziriswa.
Magwaro aonekwa neStudio7 anoratidza kuti chipatara cheParirenyatwachatovhara chimwe chikamu chinorapa vana vadiki.
Mumagwaro anyorwa nana chiremba vakuru ava vanonzi pachirungu Registrars vati havachakwanisi kuenderera mberi nebasa ravo sezvo basa rakavawandira zvikurusa zvekuti vava kutyira kuti vakaramba vachishanda vakaneta, vanozogona kuita mhosho pakurapa varwere.
Vana chiremba ava vati vachazotanga kushandawo kana vana chiremba vadiki vadzokera kumabasa kuti vabatsirane pakurapa varwere.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr Evans Masitara, vati sangano ravo riri kushungurudzwa zvikuru nekunonoka kwehurumende kugadzirisa matambudziko ana chiremba.
VaMasitara vatiwo hazvaikwanisika kuti vana chiremba vakuru varambe vachishanda vega pasina rubatsiro. VaMasitara vatiwo chinosuwisa ndechekuti dambudziko rekuramwa mabasa kwana chiremba iri rinoitika gore negore asi hurumende haigadzirisi kuti zvisaenderera mberi.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa ndivi rehurumende panyaya iyi.
Asi vana chiremba vanoti hurumende yakavimbisa kugadzirisa chinyunyuto chimwe chete chekuvawanisa mabasa kana vapedza zvidzidzo zvavo asi.
Asi zvimwe zvichemo zvavo vanoti hurumende haisati yavimbisakuzvigadzirisa, zvichaita kuti vasadzokera kumabasa.